आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२५ असोज २०७८ सोमबार, ११ अक्टोबर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२५ असोज २०७८ सोमबार, ११ अक्टोबर २०२१)
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ००:२०
श्रीशाके १९४३ शरद ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं. २०७८ आश्विन २५ गते सोमबार तद्अनुसार सन् २०२१ अक्टोबर ११ तारिख आश्विन शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथि ६ः३० पर षष्ठी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र सौभाग्य योग कौलव करण आनन्दादिमा पद्म योग चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौमा सूर्योदय बिहान ६ः०२ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः३७ मा हुनेछ । स्कन्दमाता तथा कात्यायनी देवीको पूजा ।
मेष – समय मिश्रित फलदायक रहनेछ । ऋण, रोग र शत्रुप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ । अरुको भर नपर्नुहोला । खेलकुद र भ्रमणमा रुचि होला । व्यस्तता बढ्ला । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । दौडधुप भैरहनेछ । जोखिम मोल्ने समय होइन ।
वृष – दिन शुभ र सफलतादायक रहला । उच्चाधिकारीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य सुख प्राप्त हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आशा उत्साह थपिनेछ । सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । सन्तानसुख मिल्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । आयस्रोत बढ्ला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । साहस सम्बन्धित काम बन्नेछ । सुख सम्पति वृद्धि होला । रसरागमा आकर्षित हुनुहुनेछ । मान पुरस्कारको प्राप्ति हुनेछ । भोज भतेरमा भाग लिनुहुनेछ ।
कर्कट – समय शुभ र सफलतादायक रहनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आरोग्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सुख समृद्धि हासिल हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुका साथै रोकिएका काम बन्नेछन् । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ । सन्तान सुख पाइनेछ । मान महत्व बढ्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्ला । समस्याको समाधान प्राप्त होला । आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु हितकर होला ।
सिंह – आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । भागदौड व्यस्तता बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त हुनेछ । धन मान महत्व बढ्नेछन् । ऋण रोग र शत्रुप्रति जीत होला । अस्तव्यस्ततामा कमी हुनेछ । काममा विजय प्राप्त होला । देखिएको समस्या समाधान हुनेछ ।
कन्या – मिठो भोजन मिल्नेछ । रोकिएको धन प्राप्त हुनेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । धनसम्पति ऐश्वर्य बढ्नेछ । मित्रजनको सहयोग मिल्नेछ । सबै प्रकारले अनुकूलता वृद्धि हुनेछ । नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला ।
वृश्चिक – समय अनुकूल फलदायक रहला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्रको साथ सन्ततिसुख बढ्नेछ । विवादमा नपर्नु हीतकर होला । आरोग्यता बढ्ला । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष पनि बलियो बन्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । भोग विलासमा आकर्षण बढ्नेछ ।
धनु – धनको आवागमन भैरहनेछ । भागदौड बढ्नेछ । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी उठाउन चाहेमा सफल रहनुहुनेछ । दैनिक काममा सफलता मिल्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । विवादमा नपर्नु बेस होला । मिहीनेतयुक्त काममा रूचि वृद्धि होला । अरुको भर नपर्नु नै हितकर रहला ।
मीन – आरोग्यता बढ्ला । सुख शान्ति बढ्नेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न रहनेछ । शुभ काममा भाग लिनुहुनेछ । धन यश मान पद प्रतिष्ठा बढ्ला । शुभ काम बन्नेछ । गौरव बढ्ला । सुखशान्तिमा बढोत्तरी होला । रसरागमा रुचि बढ्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको वस्तुको लागि धन खर्च गर्नुहुनेछ । आँट पराक्रम बढ्नेछ । ऐश्वर्य वृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ ।